Umgcini kaloliwe wendlu yeholide
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMarkus
Ikhaya leeholide le-100 m² kwindawo epholileyo engaphandle libonelela ngendawo efanelekileyo yabantu aba-4 ukuya kwabathandathu.
Ibandakanya amagumbi amabini okulala (umgangatho ophantsi / ongaphantsi) kunye namagumbi okuhlambela ayi-1.5, ikhitshi evulekileyo, igumbi lokuhlala, igadi yasebusika enendawo yokutyela, i-terrace kunye negadi. Iindawo zokupaka izithuthi zifumaneka ngqo endlwini.
Ukufudumeza umgangatho ophantsi kumgangatho osezantsi kuqinisekisa ubushushu obupholileyo. Indawo yomlilo yeenkuni nayo inokutshiswa. Isitya somlilo kunye ne-grill yamatye ilindele amaxesha amnandi egadini.
Indlu yokuqala yomgcini-sango yakhiwa ngo-1941 yaza yandiswa yaba sisakhiwo sokuhlala ngo-1978. Uhlaziyo olupheleleyo kunye nohlaziyo lwenzeka ukususela ngo-2008 ukuya ku-2010.
Ime ngokuthe ngqo emazantsi e-Kitzbüheler Horn ngombono weHahnenkamm yasentsomini kwaye, emantla, ukuya kwingxondorha ye-Wilder Kaiser.
I-Kitzbühel yenye yezona ndawo zidumileyo zokukhenkcela kwi-ski ehlabathini, ezinziswe kwindawo entle yaseTyrolean Alps.
Iindawo ezi-3 ezikufutshane zeski zezi: Hornbahn 2 km, Hahnenkammbahn 3 km (zombini Kitzbühel), Penzingbahn 5.5 km (ebumelwaneni Oberndorf)
Nokuba liliphi na ixesha lonyaka - nabani na ojonge uxolo kunye nokuzola kunye nokuzonwabisa uya kufumana iindlela ezininzi zokuzonwabisa, imisebenzi yezemidlalo okanye indalo entle ngendlela yeentaba, amachibi, imilambo kunye namahlathi ngaphakathi nakwindawo ejikeleze isixeko.
Ikhaya leeholide laseBahnwärter, umzekelo, libekwe ngokuthe ngqo (uhambo lwemizuzu emi-3) kwindlela yepanoramic eya eKitzbüheler Horn (ixabiso kunye nehlobo kuphela).
Iibhayisekile zeentaba zinokuqala ukhenketho ngokuthe ngqo ukusuka kwindlu - ukunyuka okukhulu kunye nokuncinci kuya kufumana indawo efanelekileyo yokuqala apho (umzekelo, uBichlach noSchwarzsee).
Unokundwendwela i-Vordergrub Landgasthof ngokuzonwabisa okumnandi ngaphakathi kohambo lwemizuzu emi-2 okanye uthathe uhambo oluya kwimyuziyam yasefama (Römerweg).
Ndisesandleni sakho nge-imeyile ngayo nayiphi na imibuzo
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$3398
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kitzbühel